Inodzivirira goko muforoma yemagetsi mota yekuchaja murwi
Yevachengeti ganda muforoma yemagetsi magetsi kuchaja murwi, iyo yekumusoro mold uye yepasi muforoma, yekumusoro yekumusoro pamusoro peiyo yepasi furu inogara ichimisikidzwa ine yekutanga isingapindike mbiru uye yechipiri isingapindike mbiru, uye yekutanga neyechipiri isingapindike mbiru ndeye kumusoro kwekupedzisira nzvimbo inoita ...
Magetsi emagetsi ekuchaja mirwi anogona kubhadhariswa imwe-kune-zhinji
Imwe-kune-yakawanda ichichaja yemagetsi kuchaja murwi, kumusoro kwemuviri mukuru kwakagadzirwa neplate yepamusoro, kumberi kwemuviri mukuru kwakagadzirwa nekabatwa skrini, kumberi kwemuviri mukuru uri pasi pechibatiso paburi, pamusoro peiyo groove yakagadzirirwa neinoenderera g ...
UUGreenPower inova iyo Nhengo yeCore yeCharIN eV
UUGreenPower ndiyo inotungamira yepasirese kupa EV yechaji huru & kuburitsa mhinduro, yakazvipira kupa zvakavimbika zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mhinduro nyowani uye kugona kushandisa zviitiko pasi rese. UUGreenPower inokudzwa kujoina zviri pamutemo Charin senhengo yepamoyo uye inotarisira ...
Nheyo dzeMagetsi Motaji Yekuchaja
Kubhadharisa chikamu chakakosha chedanho rekushandisa mota dzemagetsi. Chiitiko chekuchaja zvakanyanya chinotema sarudzo dzevatengi uye ruzivo rwemotokari. Nhasi, mutyairi wekare achataura newe nezvechaja. Isu tinoziva kuti mota dzemagetsi dzinopihwa simba ne-board board batt ...
Mashandisiro ekushandisa mota yemagetsi kuchaja mirwi
Mukupindura kurudziro yenyika yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza simba, vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza kutenga mota dzemagetsi, idzo dzisiri kungoshandisa mafuta chete asi zvakare dziri nyore. Sezvo mota dzemagetsi dzinoshandisa magetsi, kuchaja kunova dambudziko kumotokari dzemagetsi. Nhasi, ndicha teac ...
Basa rekuchengetedza uye matanho ekudzivirira emota dzemagetsi
Mumakore achangopfuura, sezvo ruzivo rwevanhu rwekufamba-shoma kabhoni rwave kuramba huchiwedzera zvakatipoteredza, varidzi vemotokari vazhinji vakasarudza kutenga mota dzemagetsi, izvo zvakakonzera kukura kukuru mumakambani emagetsi emagetsi, ayo akazoendesa musika wechaji . Iyo ...
Ndeapi mhando uye hunhu hwemagetsi emagetsi emagetsi emagetsi?
Sezvo kuwedzera kwehuwandu hwemagetsi emagetsi matsva kuri kuwedzera nekukwira, vanhu zvishoma nezvishoma vanonetsekana nezvemota nyowani emagetsi. Iyo murwi wekuchaja wakabatana zvakanyanya nemagetsi matsva emagetsi. Pasina kuchaja mirwi, yakafanana nemotokari dzemafuta dzisina gasi. Muchokwadi, kune akasiyana t ...
Magetsi magetsi kuchaja murwi simba tambo kuchenesa
Magetsi magetsi kuchaja murwi simba tambo kumisa gungano, iyo yepazasi magumo echaji pfuti inoramba isina kuchinjika, kune inoenderera yekuchaja waya, iko kutaridzika uye maitiro echaja tambo inoramba iine bhokisi rekumisikidza, iyo yepazasi chitarisiko cheiyo yekumisa bhokisi haina kuchinja ...
UUGreenPower Inoburitsa Ina Supercharging Mhinduro! Core muromo: musi August 26, rechi14 Shanghai International kuchaja zvivako indasitiri inoratidzirwa rakaitirwa Shanghai New International Expo Center. Mune kuratidzwa uku, akati wandei epamba uye ekunze nyeredzi emakambani ...
Musi waChikumi 11, iyo data yakaburitswa neChina Charge Union zvakaratidza zviri pamutemo kuti kubva muna Chivabvu 2018, nhengo dzemubatanidzwa dzakarondedzera huwandu hwe266 231 yeruzhinji yekuchaja mirwi, uye kuburikidza nenhengo dzemubatanidzwa, makomba emota akatorwa ne441,422 zvidimbu zvemashoko eruzivo. A t ...
Musi waJune 30, 2018, webhusaiti yepamutemo yeNational Big Data Alliance (NDANEV) yeNew Energy Vehicles yakaburitsa manhamba uye kuongororwa kweruzivo rwehuwandu hwekuwana hwezvinhu zvitsva muna Chivabvu. Kubva pane iyo data yekupfupikisa, bepa iri rinoongorora zvine hungwaru hwekupinda chinzvimbo ...
Chikamu cheVolkswagen Group chakagadzira uye chakaburitsa chiteshi chengarava chemotokari dzemagetsi, scooter emagetsi uye mabhasikoro emagetsi, anonzi Volkswagenpassat nharembozha yekuchaja. Kuchengeta makore makumi masere, Volkswagen ichaisa zviteshi gumi nembiri zvekuchaja nhare muWo ...